मसल्स बनाउन कस्ता खानेकुरा खाने ? थाह पाउनुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
मसल्स बनाउन कस्ता खानेकुरा खाने ? थाह पाउनुहोस्
काठमाडौं । धेरै मानिस मसल्स बनाउन फिटनेस र जिम धाउने गर्छन् । तर, खानेकुरामा भने अनभिज्ञ हुन्छन् । मसल्स निर्माणका लागि व्यायाम गरेर मात्र पुग्दैन, खानामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उसो भए के खाने त ? एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्रीः